MIDOWGA YURUB WAXAAN UGA MAHADCELINAYAA DOORKOODA KU AADAN ARRIMAHA SOOMAALIYA WAXAA YIRI FARMAAAJO
August, 27-2017 TWITTER FACEBOOK PRINT THIS PAGE SEND TO A FRIEND
Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ah ee Soomaaliya Mudane Maxamed C/laahi Farmaajo iyo Ra'iisul Wasaare Xasan Cali Khayre, ayaa shalay la kulmay Danjiraha Midowga Yurub u qaabilsan Barigga Africa, Alexandar Rondos iyo wafdi uu hoggaaminayo.
Mas’uuliyiinta labada dhinac ayaa waxaa ay ka wada hadleen howlaha ay Midowga Yurub ka wadaan Soomaaliya iyo sidii loo dar-dargalin lahaa.
Madaxweynaha Jamhuuriyadda ayaa uga mahadceliyey Midowga Yurub doorkooda ku aadan arrimaha Soomaaliya. Wuxuna xusay in Soomaaliya ay sameysay horumar dhinacyo badan leh mudadii ay ay jirtay dawladda uu hoggaamiyo.
Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya, ayaa sheegay in uu ku farxsan yahay kulan ka danjiraha midowga Yurub u qaabilsan geeska Africa oo ay Soomaaliya ka mid tahay, wuxuuna uga mahed-celiya howlaha muhiimka ah ee dalka ay ka hayaan iyo sida ay shacabka Soomaaliyeed u taageeraan xiligan muhiimka ah.
"Waxaan aad ugu faraxsanahay in Midowga Yurub ay kordhiyeen ahmiyadooda shaqo ee dalka Soomaaliya,si ay u caawiyaan shacabka Soomaaliyeed, qaybna uga noqdaan horumarka ka bilowday dalka" ayuu yiri R/W Khayre.
Dhinaca kale Safiirka Midowga Yurub ee Somalia Veronique Lorenzo, ayaa bartamihii bishan August waxaa ay sheegtay in ay shaqo u abuuri doonaan dhallinyaro Soomaaliyeed oo gaareysa ilaa 1,000.
Hadalkaasi ayaa waxaa ay ka sheegtay mar ay la kulantay Ra’iisul Wasaare Xasan Cali Khayre. Intii kulanka uu socday ayaa waxaa uu Khayre yiri.
“Waxaan safiirada uga mahad celiyey warqada qoraalka oo ay ku caddeynayaan midowha Yurub taageerada dhaqaale ee ay siiyaan Somalia, 2 Million oo Euro oo ka mid ah dhaqaalahaan waxay ku bixiyeen taageerada nooliiska, halka 2 Million oo kale ay ugu talogaleen in 1000 dhalinyaro ah shaqo loogu abuuro, 300 oo ka mid ahna jidda 30-ka lagu kabo iyo in dowlad goboleedyada la gaarsiiyo qeyb ka mid ah dhaqaalahaas.” ayuu yiri ra’iisul wasaare Kheyre oo sharxayay qoraalka lasoo gaarsiiyay oo lagu sharxay halka loogu talagalay dhaqaalaha midowga Yurub ku taageero Somalia.